Qiimayn Lagu Sameeyay Suuqa Liverpool Oo Lagu Soo Bandhigay 6 Ciyaartoy Ee Ugu Suurtogalsan In Ay Reds Ku Soo Biiri Karaan Iyo Kuwa La Fasixi Karo. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Qiimayn Lagu Sameeyay Suuqa Liverpool Oo Lagu Soo Bandhigay 6 Ciyaartoy Ee Ugu Suurtogalsan In Ay Reds Ku Soo Biiri Karaan Iyo Kuwa La Fasixi Karo.
June 12, 2019 at 07:30 Qiimayn Lagu Sameeyay Suuqa Liverpool Oo Lagu Soo Bandhigay 6 Ciyaartoy Ee Ugu Suurtogalsan In Ay Reds Ku Soo Biiri Karaan Iyo Kuwa La Fasixi Karo.2019-06-12T07:30:50+01:00 CAYAARAHA
Liverpool ayaa haddaba ka fikiraysa waxay samayn doonto inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxayna taas kala mid tahay kooxaha kale ee qorshaynaya isbadalka ay samayn doonaan inta aanu xili ciyaareedka cusubi furmin.
Liverpool waxay kooxdeeda xoojin wayn u soo samaysay xili suuqyadii la soo dhaafay, waxaana la filayaa in waxa uu Jurgen Klopp suuqa ka raadinayaa ay yihiin meelo khaas ah oo uu doonayo in uu kooxdiisa sare uga soo qaado.
Waxaa jira xidigo aan boos ku haysan shaxda Klopp kuwaas oo ay suurtogal tahay in ay bixi doonaan inta aanu suuqu xidhmin taas oo Reds ku qasbi doonta in ay markooda suuqa u galaan si ay badalkooda u keensadaan.
Qiimayn lagu sameeyay suuqa kala iibsiga kooxda Liverpool ayaa lagu soo bandhigay lixda ciyaartoy ee ay inta ugu badan suurtogal tahay in Klopp uu la soo saxiiixan karo iyo liiska ciyaartoyda ay u dhawdahay in ay bixi karaan.
Liverpool ayaa haddaba kooxdeeda ka fasaxday Alberto Moreno iyo Daniel Sturridge waana laba boos oo uu Klopp doonayo in uu ka buuxyo ciyaartoydiisa da’yarta ah ama suuqa kala iibsiga.
Jurgen Klopp ayaa doonaya in uu sameeyo wax walba oo suurtogal ah oo ay kooxdiisa Reds xili ciyaareedka cusub ugu guulaysan karto koobka premier league ee ay sida adag ku seegeen xili ciyaareedkii la soo dhaafay.
Liiska Ciyaartoyda Ay Suurtogalka Tahay In Ay Anfield Ka bixi Karaan.
Fiiro Gaar ah: Qiimaynta: 1-suurtogal aan ahayn………. 5 Suurtogalnimada ugu wayn
1. Divock Origi (Barcelona) – Qiimaynta uu ku bixi karo 3.1
Origi waxa uu seefta galka ka saaray kulamadii ugu danbeeyay ee xili ciyaareedkii dhamaaday waxaana lagu xusuustaa goolashii uu daqiiqadaha ugu danbeeyay ka dhaliyay premier league ee Everton iyo Newcastle United balse xusuusta ugu wayni waa wixii uu Barcelona ku sameeyay.
Kooxo badan ayaa xiisaynaya Origi laakiin waxay u muuqataa in uu heshiis cusub ka heli doono Liverpool balse taasi micnaheedu ma aha in uu xili ciyaareedka cusub damaanad qaad u haysto in uu Anfield sii joogi doono.
Haddii ay Liverpool la soo saxiixato xidiga kooxda Lille ee Nicolas Pepe waxay dhibaato wayn ku noqon doontaa fursadii uu Origi haystay waxayna taasi keeni kartaa in heshiis cusub laga saxiixo oo uu hal xili ciyaareed amaah kale loo diri karo.
2. Simon Mignolet (Norwich City) –Qiimaynta uu ku bixi karo 3.3
Goolhaye Simon Mignolet waxa uu xili ciyaareedkii soo dhamaaday ku koobnaa kulamadii FA Cupka iyo EFL Cupka oo Liverpool lagu soo wada reebay wareegyadii saddexaad, wuxuuna bilada Champions league ku guulaystay isaga oo aan Reds hal kulan u safan.
Waxa uu goolhaye Mignolet doonayaa in uu ku biiro koox uu ka ciyaari karo waxayna Liverpool u furan tahay in ay goolhayaha reer Belgium iibin karto si ay badalkiisa suuga uga helaan.
3. Adam Lallana (Southampton) –Qiimaynta uu ku bixi karo 3.0
Adam Lallana ayaa soo qaatay xili ciyaareedkiisii ugu xumaa ee Liverpool kadib markii uu dhaawacyo soo gaadhay u awoodi waayay in uu wax fursad ah ka helo kooxda duulaysay ee uu Klopp ku shaqaynayay.
Waxa uu Lallana sheegay in uu kooxdiisa Liverpool sii joogi doono laakiin iyada oo aanu haysan fursad badan oo uu shaxda Klopp fursad kaga heli karo waxaa la filayaa in Reds ay dhegaysan doonto dalabyada lagu doonayo.
Liverpool ayaa sidoo kale dhegaysan karta dalabyo muhiim ah oo lagu doonayo Shaqiri iyo Lovern inkasta oo Matip uu xaq u yeeshay in maamulka Liverpool ay heshiis cusub ku abaal marin doonaan.
Riix 2 si aad u akhrisato liiska ciyaartoyda Liverpool lala xidhiidhinayo iyo qiimaynta suurtogalnimada ay anfield ugu soo biiri karaan.
« Maxaad ka taqaan Xafiiska aan shaqeyn ee hoggaanka Sare Gobolka Banaadir ka tirsan?
Faah Faahin: Afar Qof Oo Lagu Dilay Gobolka Galgaduud »